Myanmar Music Feed
Summary: Welcome to myanmar music station. We build and sustain an influential platform inacreative industry withalandscape that is always changing and evolving. Myanmar music is for anyone who loves music, culture and entertainment.
Shwe FM 6th Anniversary | File Type: audio/x-m4a | Duration: 3259
Shwe FM 6th Anniversary Artist: Yair Yint Aung, Hlwan Paing, Mi Sandi, Shwe Htoo, Wai La, Ni Ni Khin Zaw, Ye Lay, G Fatt, Eint Chit, San Thit La, Lain Maw Thee, May Myat Noe, Nan Myat Phyo Thin, Nan Thuzar, Tun Tun, Examplz, Thar Dee Lu, Wana
ကော်နီ - ဆေး | File Type: audio/x-m4a | Duration: 351
Oak Soe Khant - ချစ်တဲ့အကြောင် | File Type: audio/mpeg | Duration: 295
Oak Soe Khant - ချစ်တဲ့အကြောင်း
Kyar Pyaut - IDGAF Full Album | File Type: audio/x-m4a | Duration: 1456
Kyar Pyaut - IDGAF Full Album
လေးဖြူ သီချင်းစုစည်းမှု - Lay phyu Song Collection | File Type: audio/mpeg | Duration: 2519
Lay phyu Song Collection (Myanmar New Song 2017) လေးဖြူ သီချင်းစုစည်းမှု မြန်မာသီချင်းစုစည်းမှု 01. ခရီးများအဆုံးထိ - လေးဖြူ 00:00 02. အရေးမကြီးဘူး - လေးဖြူ 03:43 03. ဒိုင်ယာရီ - လေးဖြူ 07:32 04. စိတ်ပူတယ် Sate Pu Tae - လေးဖြူ 11:39 05. ယုံကြည်ရာ Yone Kyi Yar - လေးဖြူ 15:18 06. ကြိုနှင့်တော့ Kyo Nint Tot - လေးဖြူ 19:00 07. ဒိုင်ယာရီ - လေးဖြူ 23:31 08. ရင်ထဲကမိုးစက်များ - Lay Phyu &amp; Htoo Eain Thin 27:39 09. ရေမျှောကမ်းတင် - လေးဖြူ 30:28 10. စိတ်နဲ့ခန္ဓာ Sate Nae Khan Dar - လေးဖြူ 35:45 11. ကမ္ဘာမြေအောက် Ka Bar Myay Out - လေးဖြူ 38:45
Chan Chan - Ta Kal Bel Lae Nin Ma Chit Pae Nae | File Type: audio/mpeg | Duration: 296
Chan Chan - Ta Kal Bel Lae Nin Ma Chit Pae Nae
ရေး/ဆို ကယ်လုံ K Lone - ရင်အေးတဲ့သူ့အလှ | File Type: audio/mpeg | Duration: 188
ရေး/ဆို ကယ်လုံး - ရင်အေးတဲ့သူ့အလှ Band - Desire Studio - Misty Moon Mixing - Ko Ye ( MRTV-4) Harmony - Kar Yan Director And Photography - B2
ချစ်ကောင်း,အိမ့်ချစ် - ဂီတာကုသိုလ် (Chit Kaung,Eint Chit) | File Type: audio/mpeg | Duration: 294
ချစ်ကောင်း,အိမ့်ချစ် - ဂီတာကုသိုလ် (Chit Kaung,Eint Chit)
ချစ်ကောင်း - မုဆိုးလဲသားကောင် သားကောင်လဲမုဆိုး (Chit Kaung) | File Type: audio/mpeg | Duration: 261
ချစ်ကောင်း - မုဆိုးလဲသားကောင် သားကောင်လဲမုဆိုး (Chit Kaung)
ဖြူဖြူကျော်သိန်း - ရက်ရက်စက်စက် (Phyu Phyu Kyaw Thein) | File Type: audio/mpeg | Duration: 300
ဖြူဖြူကျော်သိန်း - ရက်ရက်စက်စက် (Phyu Phyu Kyaw Thein)
ထက်အိမ် - ကျွန်တော်ဖိုးမျှော် (Htet Eain) | File Type: audio/mpeg | Duration: 276
ထက်အိမ် - ကျွန်တော်ဖိုးမျှော် (Htet Eain)
ထက်အိမ် - ကမ္ဘာ့လင်မယားပြဿနာ (Htet Eain) | File Type: audio/mpeg | Duration: 320
ထက်အိမ် - ကမ္ဘာ့လင်မယားပြဿနာ (Htet Eain)
ဖြိုးကြီး - အပျိုချော (Phyo Gyi) | File Type: audio/mpeg | Duration: 152
ဖြိုးကြီး - အပျိုချော (Phyo Gyi)
ဆုန်သင်းပါရ် - ချစ်ကြည့် (Sone Thin Par) | File Type: audio/mpeg | Duration: 276
ဆုန်သင်းပါရ် - ချစ်ကြည့် (Sone Thin Par)
ဂျုနီယာချစ်ကောင်း - ကျွန်တော်နဲ့မကြည်အောင် | File Type: audio/mpeg | Duration: 225
ဂျုနီယာချစ်ကောင်း - ကျွန်တော်နဲ့မကြည်အောင်